↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ ၁.၁၃ WHO Media centre (June 2013). "Fact sheet N°259: Trypanosomiasis, Human African (sleeping sickness)".
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ Kennedy, PG (2013 Feb). "Clinical features, diagnosis, and treatment of human African trypanosomiasis (sleeping sickness).". Lancet neurology 12 (2): 186-94. PMID 23260189.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဖရိကန်_ထရစ်ပနိုစိုမီရေးစစ်&oldid=217816" မှ ရယူရန်
၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄၊ ၁၆:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄၊ ၁၆:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။